Izikhukhula eJalimane: umonakalo, inhlekelele kanye nokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | | Izimo zezulu, Izikhukhula
I-Las izikhukhula eJalimane zichichime zonke izindaba namuhla. Futhi akuyona engezansi inhlekelele eyenzeka kuleli zwe. Okungenani abantu abangu-120 sebeshonile kanti abanye abangamakhulu eNtshonalanga Yurophu badukile ngemuva kwesikhukhula esibi kakhulu emashumini eminyaka. Izimvula ezirekhodiwe zidale ukugcwala kwemifula, kwacekela phansi isifunda.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izindaba ngozamcolo eJalimane nezingozi esibhekene nazo ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu.
1 Izikhukhula eJalimane
2 Ukuguquka kwesimo sezulu nezikhukhula eJalimane
3 Izimvula ezinamandla
4 Ingabe kungagwenywa?
EJalimane, lapho isibalo sabantu ababulewe sesingaphezu kwekhulu manje, u-Angela Merkel ucele ukuba kube nempi enqunyiwe yokulwa nokuguquka kwesimo sezulu. Kushone okungenani abantu abangama-20 eBelgium. INetherlands, iLuxembourg neSwitzerland nazo ziyathinteka. Ziningi izinto ezifaka isandla ezikhukhuleni, kepha umoya ofudumele obangelwa ukuguquka kwesimo sezulu wandisa amathuba emvula enkulu.
Umhlaba usufudumele cishe ngo-1,2 ° C selokhu kwaqala isikhathi sezimboni futhi amazinga okushisa azoqhubeka nokukhuphuka ngaphandle uma ohulumeni emhlabeni jikelele besika kakhulu ukukhishwa kwekhabhoni.
Indoda endala yazama ukungena edolobheni elacishe labhujiswa. Uthe nabazukulu bakhe bebekhona, kodwa akazitholi izihlobo zabo. Ngisho neziphathimandla zithe aziqiniseki ukuthi bangaki abantu abalahlekile. Akunasiginali yocingo ezindaweni eziningi nokuxhumana cishe akunakwenzeka. Kepha kulindeleke ukuthi lenyuke namuhla inani labashonile, futhi ngokuhamba kwesikhathi, izinga lale nhlekelele liye lacaca.
Eduzane noMfula i-Ahr, kunezinsalela ezisontekile zezindlu ezigcwele amanzi, amabhuloho aphukile, izindawo zekamu kanye namapaki ama-trailer. Kubantu abaningi abahlala lapho futhi baqinisekisile umonakalo, cishe akunakwenzeka ukucabanga ukuhlanza nokuqala kabusha. Cishe Kuthunyelwe amaphoyisa ayi-15.000 XNUMX, amasosha kanye nabezimo eziphuthumayo eJalimane ukuyosiza ekuthungatheni nasekutakuleni.
EBelgium, imifanekiso yezikhukhula ephawulekayo ibonisa ukuthi izimoto zidonswa emigwaqweni yaseVerviers. Ngenxa yobungozi bokweba, sekubekwe isikhathi sokufika ekhaya ebusuku.
ILiege yidolobha lesithathu ngobukhulu eBelgium ngemuva kweBrussels ne-Antwerp, abayalelwe ukuthi baphume ngoLwesine. Iziphathimandla zendawo zithi labo abangakwazi ukuhamba kumele bathuthele ezitezi eziphakeme kakhulu ezakhiweni zabo. Umfula iMeuse oguduza leli dolobha ulinganise ngoLwesihlanu ekuseni, kwagcwala inani elincane kwezinye izindawo.
Ukuguquka kwesimo sezulu nezikhukhula eJalimane
Ososayensi bagxeka osopolitiki ngokwehluleka ukuvikela izakhamizi zabo ezenzakalweni zezulu ezimbi, njengezikhukhula enyakatho yeYurophu nedome yokushisa e-United States. Sekuyiminyaka eminingi bebikezela ukuthi ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu okwenziwe ngabantu, izimvula zasehlobo namaza okushisa azoba namandla kakhulu. UHannah Cloke, uProfesa we-Hydrology e-University of Reading, uthe: 'Ukufa nokucekelwa phansi okubangelwe yizikhukhula eYurophu kuyinhlekelele obekufanele igwenywe”. Ababikezeli bezulu bakhiphe isexwayiso ekuqaleni kwaleli sonto, kepha ukunakekelwa okwanele kwanikezwa isixwayiso futhi namalungiselelo ayenele.
Iqiniso lokuthi yonke iNyakatho Nenkabazwe ibhekene nokushisa okungakaze kube khona nemililo kufanele kukhumbuze abantu ukuthi ezweni eliya lifudumala, isimo sezulu sethu singaba yingozi kakhulu.
Ososayensi bathi ohulumeni kumele banciphise ukukhishwa kwe-carbon dioxide okufaka isandla ezenzakalweni ezimbi kakhulu futhi balungiselele isimo sezulu esibi kakhulu. Kodwa-ke, e-UK, ehlaselwe yizikhukhula ezinzima ngoMsombuluko, iKomidi likaHulumeni eleluleka ngokushintsha kwesimo sezulu lisanda kutshela ongqongqoshe ukuthi amalungiselelo ezwe esimo sezulu esibi abi kakhulu kuneminyaka emihlanu edlule. Kusho uhulumeni uhlangane nesihlanu kuphela sezibopho zakhe zokunciphisa ukungcola.
Kuleli sonto nje, uhulumeni waseBrithani utshele abantu ukuthi abadingi ukusika izindiza ngoba lobu buchwepheshe buzoxazulula inkinga yokukhishwa komoya, futhi ochwepheshe abaningi bakholelwa ukuthi lokhu kuwukugembula.
Izimvula ezinamandla ziyaqhubeka nokukhathazeka kulo lonke elaseYurophu. Iziphathimandla manje zigxile e-Austria nasezingxenyeni ezithile zeBavaria eningizimu yeJalimane. Abezindaba base-Austrian babike ukuthi amaqembu okuphephisa abezimo eziphuthumayo endaweni yaseSalzburg kudingeke ukuthi asindise abantu abaningana emakhaya abo, lapho umgwaqo wasedolobheni ugcwale khona imvula enamandla.
Ngokusho kwabakwaReuters, izicishamlilo eVienna, inhlokodolobha yase-Austrian, zithe inani lemvula ewele ehoreni elilodwa ngoMgqibelo ebusuku lidlula irekhodi emasontweni ayisikhombisa edlule. EBavaria, okungenani umuntu oyedwa ushonile kuzamcolo.
Kumele kukhunjulwe ukuthi akuzona zonke izehlakalo ezimbi kakhulu ezingabangelwa ukushintsha kwesimo sezulu ukuthi abukho ubufakazi obanele ngalokho. Imicimbi yesimo sezulu esibi kakhulu ibikhona izigidi zeminyaka futhi ayihlotshaniswa nokushintsha kwesimo sezulu. Noma kunjalo, kunokuhlobana phakathi kwe- ukwanda kwamazinga okushisa aphakathi komhlaba kanye nokwanda kwezimo zezulu ezimbi kakhulu njengezikhukhula eJalimane.
Kube nokunyuka kokugxekwa kokuthi uhulumeni waseGerman akazange asebenzise zonke izinsiza ezikhona, kubandakanya nethelevishini yomphakathi, ukubika ngezehlakalo ezenzeka ngesikhathi sezikhukhula. Ezinsukwini ezine ngaphambi kwenhlekelele enkulu eJalimane, kubikwa ukuthi uhlelo luthumele isexwayiso ezweni naseBelgium. Noma kunjalo, akunakusiza ukuthumela isexwayiso uma abantu bengazi ukuthi kumele baziphathe kanjani ezimweni zezikhukhula futhi abayilungele inhlekelele enjalo, abagcini ukudla, amanzi nezinye izidingo eziyisisekelo. Ochwepheshe bachaze ukuthi, noma ngabe yikuphi, kunzima ukukhipha emahoreni ambalwa endaweni eseduze nomfula kanye nasesigodini esifana nedolobha laseSchulder.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngezikhukhula eJalimane.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Izikhukhula eJalimane